BAREA (Bôlida sy Faneva): Tsy nisy nieritreritra ny hanala azy ireo - ewa.mg
BAREA (Bôlida sy Faneva): Tsy nisy nieritreritra ny hanala azy ireo
News - BAREA (Bôlida sy Faneva): Tsy nisy nieritreritra ny hanala azy ireo
Manoloana ireo resaka izay miparitaka momba ireo mpilalao roalahy ireo dia nilaza ny heviny ireo mpikambana ao amin’ny fédérasiona Malagasin’ny baolina kitra. Nambaran’izy ireo tamin’izany fa tsy misy izany fanesorana an’i Lalaina Nomenjanahary na Bôlida sy Faneva Ima ao anatin’ny ekipam-pirenena malagasy izany mihitsy.
Nohamafisin’ny DTN-FMF tamin’izany fa tsy ireo olana kely izay azo ifampiresahana akory no hanapotehina ny tanjona goavana ho an’ny baolina kitra Malagasy. Nambaran’ingahy Debon Jean François izay tale teknikan’ny federasiona nandritra ny nivahinianany tao amin’ny Televiziona Malagasy fa anjaran’ny mpanazatra Nicolas Dupuis irery ihany no misafidy malalaka izay mpilalao heveriny fa tokony handrafitra ny Barean’i Madagasikara. Ho an’ity mpanazatra teratany Frantsay ity dia ny fifantohana amin’ny fanomanana ny CAN 2019 no tokony himasoan’ny rehetra fa tsy tokony hamboly olana ho an’ireo mpilalao izay efa manao ny ainy tsy ho zavatra ka nahazoana izao vokatra izao.
Cet article BAREA (Bôlida sy Faneva): Tsy nisy nieritreritra ny hanala azy ireo est apparu en premier sur déliremadagascar.
Barea - Bolida - Faneva Ima
Art : Maminiaina Rasoamanana signe sa première exposition
Maminiaina Rasoamanana fait un bond en avant à travers sa première exposition. Artiste-peintre autodidacte, Maminiaina Rasoamanana se dévoilera à travers sa toute première exposition. Du 6 au 20 février, deux sculptures, 14 tableaux et 15 de ses photographies trôneront à la maison d’Art à Antaninandro. Durant cette exposition, il présentera une dizaine de toiles déclinées sous de multiples techniques, que ce soit du pouring, collage ou sculpture en jouant avec divers types de supports dont le bois, le carton, les tissus en jute… D’autre part, le jeune homme dévoilera également ses clichés photographiques en noir et blanc. Comme tout artiste de son âge, en devenir, les grandes personnalités à l’instar de Pierrot Men sont les modèles à suivre. Engagé, il décrit de façon artistique la nature et la culture malgache à travers ses œuvres. Une optique qui se traduit par le biais du “recycl’art” et les textes descriptifs, à l’exemple de « Voajanahary », la peinture à l’huile sculptée sur carton qui renvoie au masque africain et qui rappelle notre origine et notre attachement à la terre mère. Le tableau montre nos richesses naturelles et notre identité culturelle qui est de respecter et de ne faire qu’un avec la nature. Une exposition montrant un patchwork artistique mêlant plusieurs disciplines en accord parfait. Natif d’Antananarivo, le jeune homme plonge dans le monde de l’art depuis sa tendre enfance. Passionné de dessin depuis son plus jeune âge, il s’est tourné vers la photographie en 2008. Pour lui, la peinture et la photographie sont un moyen d’expression où il se laisse emporter par la créativité en utilisant plusieurs médiums et matières dans ses compositions. « La récupération est un grand sujet pour moi, comme les sacs en jute, les chutes de bois précieux, les vieilles pièces de monnaie, les cartons », relate-t-il. « Je travaille aussi sur plusieurs sortes de support selon mes inspirations. Mon but est la conscientisation de l’humain, de la valeur de la biodiversité qu’il faut préserver à travers des œuvres lyriques en utilisant plusieurs techniques et médiums de peinture. Par ailleurs, je suis un adepte du noir et blanc et du recycl’art, qui constituent un aspect de ma personnalité artistique », continue-t-il. Zo Toniaina L’article Art : Maminiaina Rasoamanana signe sa première exposition est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Art : Maminiaina Rasoamanana signe sa première exposition a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Harena-Madagasikara: andiany faha-6 ny fifaninanana pika sary
Toerana manan-tantara, vakoka… Manana maro amin’ireny i Madagasikara, saingy tsy mbola fantatra ny ankamaroany. Mila harovana ihany koa anefa mba tsy ho simba na ho levonin’ny tantara. Tafiditra ao anatin’ny ezaka ataon’ny Harena-Madagasikara ny fanatontosana fifaninanana pika sary, amina lohahevitra: “ harem-bakoka ara-kolontsaina tandindonin-doza”. Andiany fahenina ny amin’ity taona 2021 ity. Afaka mandray anjara avokoa ny feno 18 taona no ho miakatra ka tsy matihanina amin’ny pika sary.Atao nomerika (. JPG) ny sary pika heverin’ny mpifaninana fa maneho io harem-bakoka ara-kolontsaina tandindonin-doza io. Ny 300dpi no “résolution” farafahakeliny ampiasaina ka ahazoana ny habean’ny sary 2000x3000pixels. Arahina fanazavana, mifandraika amin’ny lohahevitra (harem-bakoka ara-kolontsaina tandindonin-doza) ahitana andalana 40 eo ho eo raha be indrindra ny sary.Farafandraisana ireo sary hifaninana, ny 5 oktobra 2021, ka alefa amin’ny mail: “harenamadagasikara@gmail.com”. Na, haterina ao amin’ny Restaurant Au Bon Accueil, ambanin’ny Jirama Ambatonakanga, amin’ny format A4, ny sary. Azo alefa amin’ny adiresy “Harena Madagasikara s/c Mr Manalintsoa – Lot VC 57 Ambatonakanga – 101 Antananarivo, ihany koa ho an’izay lavitra, ny sary hifaninana.Lelavola mitentina 900 000 Ar, 600 000 Ar, ary 300 000 Ariary, ho an’ny laharana voalohany sy faharoa ary fahatelo.HaRy Razafindrakoto L’article Harena-Madagasikara: andiany faha-6 ny fifaninanana pika sary a été récupéré chez Newsmada.
BNI Madagascar-MJS : fiaraha-miasa ho fanohanana ny mpiasa
Vita Sonia, omaly, tao amin’ ny Lapan’ny fanatanjahantena sy kolontsaina eo Mahama­sina, ny fifanaraham-piaraha-miasa eo amin’ny minisite­ran’ny Tanora sy fanatanjahantena (MJS) sy ny BNI Ma­da­gascar. Mitovy fijery ny roa tonta, amin’izay tokony hatao hanampiana ny mpiasam-panjakana ao amin’ny MJS, amin’ny alalan’ireo tolotra karazany maro sy miavaka, ho fampandraisana anjara ny rehetra eo amin’ny lafiny sosialy sy toekarena.« Aroson’ny BNI Mada­gas­car ny tolotra tsara indrindra ho an’ireo mpiasa rehetra amin’ny zanabola ambany sy ny vahaolana mora hahazoam-bola. Manakaiky ny mpanjifa hatrany ny BNI avy amin’ireo masoivoho marobe manerana ny Nosy », hoy ny tale jeneraly lefitra, i Denis Bareau. Manana sampandraharaha mifandray amin’ny Andrimpanjakana samihafa ity banky ity. Na ireo mpiasam-panjakana vaovao aza, tsy diso anjara amin’ny to­lotra.“Mpiasa arivo mahery ao amin’ny MJS, mila fiarovana sy tsara tohana ka mila banky azo antoka. Antony voalohany fiaraha-miasa, fiarahan’ny fanjakana sy ny tsy miankina. Manomana ny ho avy koa izahay amin’ny fanohanana ireo federasiona sy fanamboarana fotodrafitrasa ho an’ny fanatanjahantena. Fomba iray hoentin’ny minisitera ho fampandraisana anjara ny tanora miady amin’ny fahantrana amin’ny toerana misy azy”, hoy ny Sekretera jeneralin’ny MJS, Ralaivao. “Marihina fa mandresy lahatra ny mpiasa amin’ny tombontsoa mety ho azony avy amin’ny BNI Madagascar ny minisitera, indrindra amin’ izao andron’ny digitalisation izao fa tsy misy fanerena akory », hoy ihany ny Sekre­tera jeneraly.R.MathieuL’article BNI Madagascar-MJS : fiaraha-miasa ho fanohanana ny mpiasa a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka ny lisitra vonjimaika ho an’ny mpanao gazety matihanina
Nampahafantarin’ny vaomiera mpandinika ny fanomezana karatra ny mpanao gazety, omaly, ny lisitra vonjimaika ho an’ireo mpanao gazety matihanina manerana ny Nosy. Miisa 1607 ireo nametraka fangatahana ka miisa 1 483 ireo nahafeno ny fepetra sy tafiditra anatin’io lisitra vonjimaika io. Tsy nahafeno ny fepetra kosa ny 124.Avy eto Analamanga ny 655 amin’ireo1 483. Faritra vitsy mpanao gazety indrindra kosa ny any Melaky. Miisa11 ireo mpanao gazety any an-toerana raha io lisitra vonjimaika io.Hatao peta-drindrina eny amin’ny tranombokim-pirenena sy eny Nanisana, biraon’ny minisiteran’ny Serasera sy kolontsaina, ny lisitra nasionaly. Isaky ny biraon’ny CPR isam-paritra kosa ny ankoatra izany.Homena 10 andro manomboka, anio 16 jolay ny mpanao gazety ireo hitondra fanamarihana. Manao taratasy alefa amin’ny filohan’ny Vaomiera, i Jean Aimé Rambeloson ireo manana fitarainana, momba izany. Havoaka ny lisitra farany avy eo ka miainga avy amin’izany ny hampiasaina amin’ny fifidianana ireo ho mpikambana vaovao hitantana ny Holafitry ny mpanao gazety (OJM).Synèse R. L’article Nivoaka ny lisitra vonjimaika ho an’ny mpanao gazety matihanina a été récupéré chez Newsmada.
Simban’ny fandalovan’ny ranobe tamin’ny fotoam-pahavaratra teo ny fefiloha iray ao amin’ny kaominina Amparafaravola ka miantso vonjy amin’ny fitondrana ny mpamboly. Tsy vitan’izy ireo intsony ny manarina izany ka manao antso avo amin’ny fitondrana foibe izy ireo hanamboarana azy io maika satria akaiky ny fotoam-pambolena. Efa nisy taratasy napetrak’izy ireo ao amin’ny minisiteran’ny Fambolena, ny fiompiana ary ny jono hijery akaiky ny amin’ny tsy maintsy hanamboarana izany fefiloha izany, miantoka fanondrahana tanimbary 6 000 ha.Zahan’ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny ao amin’ny distrikan’i Betafo ny fotodrafitrasa laharam-pahamehana ao amin’ireo kaominina ambanivohitra rehetra. Ao Mahaiza, ohatra, mivelona amin’ny fiompiana sy ny fambolena ny mponina ao amin’io kaominina io ka nilofosan’izy ireo ny fanamboarana lakandrano, nojerena koa ny famatsiana jiro sy rano any amin’ny fokontany. Misy ny fanofanana ireo tantsaha amin’ny asa fihariana ataon’izy ireo: fambolena, fiompiana, asa tanana. Laharam-pahamehana koa ny fiaraha-miasa eo amin’ny fitadiavana lalam-barotra hatrany Antsirabe.Mitombo isa ny mivelona amin’ny sehatra tsy ara-dalàna, indrindra ny amin’ny varotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Fanadihadiana hita avy any Atsimondrano, avy any Avaradrano, amin’izao fanampiana sosialy izao, ny nahitana izay fitombon’ny tsy anasa izay avy any amin’ny faritra afaka haba sy ny kaoperativa fitateram-bahoaka. Mbola tsy misy antontanisa mazava tsara amin’ireo fa ny kaominina isanisany ny mahita fitombon’izany any aminy. Manamarina izany ny fahamaroan’ireo manao “taxi-bisikileta”, saika mpiasa avy amin’ny kaoperativa mpitatitra, very asa, ny ankamaroany.L’article Vaovao tambatra a été récupéré chez Newsmada.
Zo Sitrakiniavo: “Manana andraikitra amin’ny tanindrazana ny mpanoratra sy ny poeta”
Feno enimpolo taona tamin’iny taona 2020 iny ny fiverenan’ny Fahaleovanten’i Madagasikara. Manomboka izao indray izany ny enimpolo taona manaraka. Hanao ahoana ny fiatrehan’ny mpanoratra ankehitriny izany?Manoloana ny zava-misy ankehitriny, fanontaniana manitikitika ny saina aman’eritreritra ny hoe: tsy tafita tamin’ny taranaka aty aoriana ve ny fanilon’ny fitiavan-tanindrazana? Tsy naharary antsika tokoa angamba ny nitaky izany teo am-pelatanan’ny mpanjanatany, nibodo antsika nandritra ny efatra amby enimpolo taona, na ny fanabeazana maha olom-pirenena vanona no tsy ampy. Tsikaritra fa tsy mifantsika intsony ao am-pon’ny ankamaroan’ny taranaka ankehitriny ny lanjan’izany atao hoe Fahaleovantena izany. Raha anontaniana aza ny fahalalan’ny olom-pirenena ny hevitra fonosin’izany, azo antoka fa betsaka ireo tsy mahalala. Raha ireo singa fantatry ny besinimaro toy ny fananana lalàmpanorenana manokana, ny fananana manokana filoham-pirenena sy governementa, ny fananana sainam-pirenena sy hiram-pirenena mampiavaka azy… no atao indray mijery, feno ny fepetra ilazana fa mahaleo tena isika. Saingy, alaim-panahy matetika ny olom-pirenena liana sy mpanaraka ny zava-misy iraisam-pirenena hieritreritra fa tsy foana tsy akory ny fanjanahantany. Naka endrika vaovao fotsiny izany ary maro ny endrika isehoany, toy ny fanaovana kely tsy mba mamindro ny firenena marefo, ny fanambakana sy ny fandrobana ankolaka ny haren’izy ireo, ny fanaovana ankivy ny toekareny, ny famotehana ny kolontsainy sy ny teniny, ny fanaovana saribakoly ireo mpitondra ao amin’izy ireo hikatsahana tombontsoa sy ny maro tsy voatanisa. Iniana takonana izany! Ny raharaha politika ao amin’ny firenena matetika, toy ny horonantsary tsara rindra ka izy efa vita no hitan’ny besinimaro fa ny ao ambadiky ny fakan-tsary kosa, mijanona ho tsiambaratelon’ny mpanatontosa sy ny mpilalao. Tsy tokony hitazam-potsiny izany ny poeta sy ny mpanoratra.Tsy mahaliana loatra ny mpanoratra sasany ny manoratra politikaOlona afaka sy miaina ny fahafahany anaty izy ireo ka tsy tokony ho mena-maso miteny sy hiraviravy tanana. Efa mankaleo sy mankadilo sofina ny olom-pirenena ny resaka mamofompofona politika sy ny kabary ambony vavahady; efa tsy mahaliana intsony ny tanora ankehitriny ny vaovao mikasika ny raharaham-pirenena ka ny zavakanto sy ny soratra sisa fitaovana tena mahomby hoenti-mampita hafatra. Indrisy, maro amin’ireo tanora poeta ihany koa ny tratran’izay viriosin’ny tsy fahalinana amin’ny raharaha politika sy ny raharaham-pirenena izay. Nefa tsara indrindra raha tena miaina ny vanim-potoany izy ireo ary manova manaraka izany ny tolona an-kanto ataony hahatonga ny mpamaky hiaina ny vanim-potoany ihany koa. Irariana indrindra ny hisokafan’izy ireo amin’ny lohahevitra hafa fa tsy mijanona fotsiny amin’ny resaka fitiavan’olon-droa, na raha manoratra mikasika ny tanindrazana, mifantoka amin’ny fitsikerana ny mpitondra sy ny fahalovan’ny fiarahamonina ato anatiny. Tsy sanatrian’ny vava isika ihany no hifanipaka anatiny toy ny valala an-karona. Manoloana izany, mila manabe ny poeta, mila manakatra ny miafitra any ambadiky ny endrika ivelan’ny politika enti-mandrebireby ny saim-bahoaka, hamoha ireo valalabemandry iniana ampatoriana. Mila mitolona ho an’ny tena fahaleovantena!Zo Sitrakiniavo sy ny literatioraRajaonarison Sitrakiniavo Njaratiana Herizo, fantatra amin’ny hoe Zo Sitrakiniavo, eo sehatry ny Literatiora. Mpanoratra sy Poeta ao amin’ny Faribolana Sandratra, nanomboka ny taona 2015 ny lehilahy. Nianatra tao amin’ny Sekoly Fanabeazana Fototra Tsarahonenana Sadabe izy ny 1988-1989. Voatendrin’ny Fanjakana hiasa tao Ambohimanarina Ambohitrolomahitsy ireo nahitany masoandro (Rajaonarison evariste sy Razoelisoa), izay samy mpampianatra tamin’ny ambaratonga fototra, ny taona 1990 ary tao izy no nahazo ny mari-pahaizany voalohany. Tombony manokana ho azy ny fisian’ireo marobe teo ambany masony, izay azo heverina fa namolavola azy ho tia vakiboky sy retsika nanitikitika sahady ny talentam-panoratana natory tao anatiny. Nalefa nanohy fianarana tany an-dRenivohitr’i Vakinankaratra ny tenany, ny taona 1993 (Kôlejy Md Vincent de Paul Ambohimena sy Notre Dame de l’Annonciation Mandaniresaka). Rehefa nahazo ny mari-pahaizana Bakalôrea, ny taona 2000, dia niakatra teto Vohitsara ary nandranto fahaizana amam-pahalalana tao amin’ny Departemanta Jeografia, Oniveriste an’Antananarivo. Namafisiny tamin’ny fianarana Lalàna izany. Tafiditra tamin’ny fifaninanana handraisana ho mpiasam-panjakana ambony Enam (Ecole Nationale d’Administration de Madagascar) izy, ny taona 2011. Ny fankafizana ny tononkalon-Dry J.J. Rabearivelo sy ireo Mpanoratra kalaza hafa ao amin’ny Takelaka Notsongaina no hiaka nampifoha ny talentam-panoratany, tamin’ny taona 2005. Ny fifampikasohana tamin’ireo sakaizany Mpanoratra ao amin’ny Faribolana Sandratra no nampiboiboika sy nampahazo sehatra tanteraka teo amin’ny kianjan’ny kantony, indrindra ny fanoratana tononkalo, sombintantara, sombintsoratra, riankalo, tantara foronina ary lahatsoratra an-gazety.Ny bainga voavadika 2014: « Onja iray firitsoka », hetsika sy amboaran-tononkalo niarahany tamin-dry Tsy Avahana, Zazangaly ary Martelle Nath; 2015: « Ritsoka », amboaran-tononkalo amin’ny anarany manokana; « Malaimisaraka », amboaran-tononkalo niarahany tamin’i Tsy Avahana; 2016-2017: « Soradia I sy II », tononkalo mitety vazan-tany sy amboara notontosainy niaraka tamin-dry Riambola Mitia, Zazangaly, Andriniela, Tahirintsoa, Eluart Andriantovonirina ary i Tsy Avahana. « Anjavidy », hetsika sy amboaran-tononkalo nifandrimbonany tamin’i Tsy Avahana ; 2018: « Anjankira », hetsika sy amboaran-tononkalo nifanotronany tamin-dry Andriniela, Narilala, Rojo. Tantara foronina indray no vinavinainy havoaka ato ho ato. Lahatsoratra nangonin’i NarilalaL’article Zo Sitrakiniavo: “Manana andraikitra amin’ny tanindrazana ny mpanoratra sy ny poeta” a été récupéré chez Newsmada.
Fepetra hoan’i tsy miankina :: Namoahana naoty ny momba an’ireo mpiasa marefo
Nilatsaka ny didim-pitondrana navoakan’ny minisiteran’ny Asa sy fampananana asa, ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy, afak’omaly, momba an’ireo mpiasa marefo na taizan’aretina eny anivon’ireo orinasa tsy miankina. Raha fehezina dia tokony hiverina amin’ny asany toy ny teo aloha amin’izay izy ireo, ka afaka manapaka ny fifanarahana araka asan’izy ireo ny mpampiasa raha tsy voahaja izany. Fifampidinihana teo amin’ny telo tonta (ny minisitera sy ny mpampiasa ary ny Sendikan’ny mpiasa) no nahafahana namoaka an’io naoty io. Manome alalana amin’ny fanapahana ny karaman’ireo mpiasa amin’ny fotoana tsy hiasany ihany koa io didim-pitondrana io, raha ohatra ka misy ny fanapahana ny asa. « Manana fahefana hanapaka ny fifanarahana araka asan’ireo olona marefo amin’ny Covid-19 ny orinasa raha toa ka tapitra ny dimy ambin’ny folo andro izay efa namoahana naoty nanomboka tamin’ny 29 jona lasa teo », araka ny voarakitry ny didim-pitondrana. Tsy mitombina intsony, noho izany, ny fanapahana ny asa noho ny aretina mitaiza an’ireo mpiasan’ny tsy miankina, ka nanomezana alalana azy ireo hijanona any an-trano nefa sady nandray ny karamany ihany, teo aloha teo. L’article Fepetra hoan’i tsy miankina :: Namoahana naoty ny momba an’ireo mpiasa marefo est apparu en premier sur AoRaha.
Fiatrehana ny Covid-19: hopitaly valo nahazo “extracteur d’oxygène”
Nahazo “extracteur d’oxygène” avy amin’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka ny hopitaly valo ho fiatrehana sahady ny fandraisana an-tanana ny valanaretina Covid-19 ao anatin’ny vanim-potoana ririnina, araka ny toromarika nomen’ny minisitra ny Fahasalamam-bahoaka, ny profesora Rakotovao Hanitrala Jean Louis. Anisan’ireo nisitraka izany ny CHRR Maevatanana, ny CHRR Bongolava, ny CHRR Farafangana, ny CHRR Itasy, ny CHRD Faratsiho, ny CHRD Ambatolampy, ny CHRD Ikalamavony, ary ny CHRD Manandriana Amoron’i Mania. Nitondra fanazavana mikasika ilay « souche mutante » ihany koa ny minisitra nandritra ny Andro fifampizarana momba ny Covid-19 teo amin’ireo mpiantsehatra tamin’ny vondrona maro: fandraharahana, fahasalamana, sosialy, teny amin’ny Akademia nasionaly malagasy Tsimbazaza. Nambarany fa taorian’ny fitsirihana natao, voamarina fa tsy mbola misy eto Madagasikara io « souche mutante » io. « Tsy natao hampisy ny gaboraraka anefa izany », hoy izy, fa vao mainka hanamafisana ny fanarahana ireo fepetra rehetra efa napetraka.Vonjy L’article Fiatrehana ny Covid-19: hopitaly valo nahazo “extracteur d’oxygène” a été récupéré chez Newsmada.